Inguqulo entsha yeFirefox 76 isivele ikhishiwe futhi lezi yizindaba zayo | Kusuka kuLinux
Abathuthukisi beMozilla bakhishiwe izolo kwethulwa i- inguqulo 76.0 yesiphequluli sakho seFirefox esivele itholakalela ukulanda noma ukuvuselela izinhlelo ezahlukahlukene zokusebenza (iWindows, iLinux neMacOS)
Le nguqulo entsha iza nezinye izici ezinhle, Ngaphezu kwalokhu kuthuthukiswa kuyenziwa futhi ikakhulukazi ukulungiswa kwamaphutha lapho kwakhishwa khona isixazululo sezimbungulu ezimbili ezazibhekwa njengezibalulekile.
Kule nguqulo entsha onjiniyela abangama-52 babambe iqhaza, kufaka phakathi amavolontiya angama-50 futhi yethula uchungechunge lwezici ezintsha, njengokuqinisa ukuvikelwa kwe-ID yomsebenzisi nephasiwedi, ukusekelwa kwe- iziteshi zomsindo ezikuvumela ukuthi ujoyine izingcingo ze-Zoom nge-browser noma ngokusebenzisa i-WebRender enikezela injini kuma-laptops e-Intel.
1 Izici ezintsha eziyinhloko zeFirefox 76
2 Ungayifaka kanjani inguqulo entsha yeFirefox 76 kuLinux?
Izici ezintsha eziyinhloko zeFirefox 76
Isici esisha esibaluleke kakhulu ukuthuthukiswa kokuphepha komsebenzisi yesiphequluli, ngenxa yokuhlanganiswa komphathi wephasiwedi we-Lockwise. Okokugcina kungatholakala kusigaba se- "Connections and passwords" seFirefox 76 okuyi ixwayisa umsebenzisi ngqo lapho iphasiwedi abayisebenzisayo isengozini, enye yama-akhawunti akho aku-inthanethi ibandakanyekile ekwephuleni iwebhusayithi noma iphasiwedi efanayo isetshenziselwa amanye amawebhusayithi.
Futhi, le nguqulo ye IFirefox 76.0 iletha iziqeshana zokuphepha eziyi-11, kufaka phakathi eyodwa ehlobene nezimbungulu zokuphepha kwememori kuFirefox 75 nakuFirefox ESR 68.7.
"Ezinye zalezi zinambuzane zikhombise ubufakazi bokonakala kwenkumbulo futhi sicabanga ukuthi ngomzamo owenele, ezinye zazo bezingaxhashazwa ukwenza ikhodi engafanele," kusho uMozilla.
Ngasohlangothini lokuthuthukiswa konjiniyela, kwenziwe izinguquko ku- Ama-DevTools, manje alingisa ukusebenza kwedivayisi ukuphatha ukuthinta okubili ukusondeza. Lokhu kwakhela ekuthuthukisweni kwangaphambilini ekunikezelweni okulungile kwama-meta windows tag, okuvumela onjiniyela ukuthi basebenzise amasayithi abo weFirefox ye-Android ngaphandle kwedivayisi.
Ukuhlolwa kwe- IWebSocket manje isekela ukubukwa kuqala komyalezo we-ActionCable, ukungeza kuhlu lwezivumelwano ezifomethwe ngokuzenzakalela njenge-socket.io, i-SignalR, i-WAMP, njll.
IMozilla imemezela ikakhulukazi lokho IFirefox 76 isekela ama-worklet alalelwayo que vumela ukucutshungulwa komsindo okuyinkimbinkimbi, njengeqiniso langempela nemidlalo eku-inthanethi.
Kubasebenzisi beFirefox yeWindows, i-WebRender enikezela injini manje isiyatholakala ngokuzenzakalela kuma-laptops akamuva e-Intel ngesinqumo se-1920 × 1200 noma ngaphansi.
Ekugcineni, uma ufuna ukwazi okwengeziwe ngale nguqulo entsha, ungabheka imininingwane ku- isixhumanisi esilandelayo.
Ungayifaka kanjani inguqulo entsha yeFirefox 76 kuLinux?
Noma ukufaka isiphequluli, bangakwenza ngomyalo olandelayo:
Manje kulabo abangabasebenzisi beFedora noma yikuphi okunye ukusatshalaliswa okususelwe kuyo, vele uvule ukuphela bese uthayipha umyalo olandelayo kuso (uma usuvele unayo inguqulo yangaphambilini yesiphequluli efakiwe):
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Aplicaciones » Inguqulo entsha yeFirefox 76 isivele ikhishiwe futhi lezi yizindaba zayo
Kuhle, ngizohlola i-worklet yomsindo nge-Zoom namuhla.